Ukupakisha okunokuphinda kwenziwe kwakhona, ukuPakisha okuHambelanayo, ukuPakisha okuguqukayo-NGOKUPHELELEYO
Amava amashumi eminyaka enze ukuba iJiahe ihlala iluhlaza ukuphakheja ukuba inikeze ezona zisombululo zihambele phambili kwezobuchwephesha kwiiphakeji ezinokuphinda zisebenze kwaye ezizinzileyo. Ingakumbi entsha esungulwe maleko ezininzi isithintelo se-PE ingxowa inokuthi ithathe indawo ye-PET kunye nezinye iipakethe zokukhusela, ezenza ukuba i-100% iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe. Inika ukufuma okugqwesileyo, ukhuselo lwegesi kunye nesithintelo sevumba, yenzelwe ukuvumela abanini beebhanti ukufikelela kubomi beshelf, ukunceda ukugcina imveliso intsha. Isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokupakisha njengokutya, isiselo, ukutya kwezilwanyana, izithambiso, kunye nokhathalelo lomntu, ukhathalelo lwasekhaya kunye namanye amashishini.
Isingxobo sethu esinokuphinda sisebenze esinika imbasa kuhlobo lwakho kunye nokusingqongileyo ngokusebenza kakuhle kweepakethe kunye neelebheli zabahlobo zeHow2Recycle. Ileyibheli inxibelelana ngokucacileyo nabathengi bakho ngendlela yokupakisha enokuthi iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isebenze e-US nase Canada.
Isidingo se-100% Ingxowa epheleleyo enokurisayikilisha
Iiplastiki zizinzile, zilula kwaye azibizi mali ininzi.
Banokuxonxwa ngokulula kwiimveliso ezahlukeneyo abathi bafumane ukusetyenziswa kwizicelo ezininzi. Qho ngonyaka, ngaphezulu kwe-100 lezigidi zeetoni zeplastiki zenziwe kwihlabathi liphela. Phantse i-200 yeebhiliyoni zeepawundi zempahla entsha yeplastiki yenziwa nge-theromoformed, foamed, laminated and extruded in million of package and products. Olunye uhlobo oluzinzileyo, ukuphakheja okuhlala kuluhlaza kweJiahe kuphuhlise i-100% yePolyethylene (PE) yakutya.
Isisombululo sisebenzisa inye kuphela impahla eluhlaza kulwakhiwo lwayo, i-polyethylene, yintoni eyenza ukuba ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kube lula kumanqanaba okuqala kunye nasemva kokusetyenziswa, naphi na apho kukho ikhonkco, kunokwenzeka ukuba usebenzise iisimboli zamanye amazwe: 4 (LDPE) endaweni ye-7 (abanye), emele izibonelelo zekhonkco lonke lokurisayikilisha.
Masenze ubomi bube luncedo ngakumbi: Ingxowa yethu entsha enokuphinda isebenze kukutsiba phambili ekwenzeni ukuphakheka kwakhona kweplastiki okuguqukayo kube yinyani. Kubantu abaPlanethi, kubhetele imeko-bume, kubhetele kwishishini.
Iingxowa ezinokuphinda zisebenze
Ukuphinda kwenziwe ntsha kwakhona kunye neebhegi ezinokuphinda zisebenze kwakhona
Ngombulelo kwisingxobo esinokuphinda sisebenze esivela kwiPakethe ye-Evergreen, iyasinceda ukuba sibe nelinye inyathelo lokupakisha okuzinzileyo.
Isithintelo sayo esiphakeme esinokuphinda sisebenze se-PE / iibhegi ze-PE zoyike kakhulu!
Isisombululo esiphakamileyo sokuphinda sisebenzise ukuphakheja sasisusa amaxhala ethu kwithala kwaye sasinceda ukutshintsha zonke iibhegi zethu eziqhelekileyo kuhlobo olunokuphinda lusetyenziswe.
Enkosi ngomzamo wakho wokubonelela ngesisombululo sokupakisha esizinzileyo kwinkampani yethu!
Sothukile ngokuqinisekileyo yingxowa yayo ye-PE / PE; ukuprinta okugqwesileyo, ukutywina okugudileyo kwicala, uziphu osicaba kunye nefestile ecacileyo. Eyona ngxowa ibambekayo enokuphinda isetyenziswe esakha sayibona!
Ukuba ufuna isisombululo sokupakisha esizinzileyo, sicebisa ukuba i-Evergreen Pack iqale.